Levitikus 15 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
Genesis Eksodus Levitikus Numeri Duteronomi Yoshuwa ABagwebi Rute 1 Samuweli 2 Samuweli 1 Kumkani 2 Kumkani 1 Kronike 2 Kronike Ezra Nehemiya Estere Yobhi INdumiso IMizekeliso INtshumayeli INgoma yazo iiNgoma Isaya Yeremiya IZililo Hezekile Daniyeli Hoseya Yoweli Amosi Obhadiya Yona Mika Nahum Habhakuki Zefaniya Hagayi Zekariya Malaki Mateyu Marko Luka Yohane IZenzo Roma 1 Korinte 2 Korinte Galati Efese Filipi Kolose 1 Tesalonika 2 Tesalonika 1 Timoti 2 Timoti Tito Filemon Hebhere Yakobi 1 Petros 2 Petros 1 Yohane 2 Yohane 3 Yohane Yude ISityhilelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
15 Waqhubeka uYehova ethetha kuMoses nakuAron, esithi: 2 “Thethani koonyana bakaSirayeli, nithi kubo, ‘Xa ithe indoda yanobhobhozo+ oluphumayo kwilungu layo lenzala, ubhobhozo lwayo aluhlambulukanga. 3 Kuko oku ukungahlambuluki kwayo ekubhobhozeni kwayo: Enoba ilungu layo lenzala liyachiza ukubhobhoza kwalo, okanye ilungu layo lenzala livalekile ekubhobhozeni kwalo, yoba yengahlambulukanga. 4 “‘Nawuphi na umandlalo alala kuwo lowo ubhobhozayo woba ngongahlambulukanga, nayo nayiphi na impahla ahlala kuyo yoba yengahlambulukanga. 5 Yaye umntu ochukumisa umandlalo wakhe wozihlamba izambatho zakhe, ahlambe umzimba emanzini aze abe ngongahlambulukanga kude kuhlwe.+ 6 Lowo uhlala phezu kwempahla abehleli kuyo obhobhozayo wozihlamba+ izambatho zakhe, ahlambe umzimba emanzini aze abe ngongahlambulukanga kude kuhlwe. 7 Yaye lowo uyichukumisayo inyama yobhobhozayo+ wozihlamba izambatho zakhe, ahlambe umzimba emanzini aze abe ngongahlambulukanga kude kuhlwe.+ 8 Xa athe obhobhozayo wamtshicela ohlambulukileyo, wozihlamba izambatho zakhe aze ahlambe umzimba emanzini, abe ngongahlambulukanga kude kuhlwe. 9 Yaye nayiphi na isali+ akhwela kuyo obhobhozayo yoba yengahlambulukanga. 10 Nabani na ochukumisa nantoni na ebiphantsi kwakhe woba ngongahlambulukanga kude kuhlwe; lowo uyithwalayo wozihlamba izambatho zakhe, ahlambe umzimba emanzini aze abe ngongahlambulukanga kude kuhlwe. 11 Nabani na ochukunyiswa ngobhobhozayo+ engaziyalazanga ngamanzi izandla zakhe, wozihlamba izambatho zakhe, ahlambe nomzimba ngamanzi, abe ngongahlambulukanga kude kuhlwe. 12 Isitya sodongwe asichukumisileyo obhobhozayo siya kukrotyozwa;+ nasiphi na isitya somthi+ soyalazwa ngamanzi. 13 “‘Xa athe wahlambuluka obhobhozayo ekubhobhozeni kwakhe, wozibalela imihla esixhenxe yokusulungekiswa kwakhe,+ aze azihlambe izambatho zakhe, ahlambe umzimba wakhe emanzini aqukuqelayo;+ wohlambuluka ke. 14 Ngomhla wesibhozo wozithabathela amahobe asendle+ abe mabini okanye amantshontsho amavukuthu abe mabini, eze phambi koYehova emnyango wentente yokuhlangana, aze awanike umbingeleli. 15 Awanikele umbingeleli, elinye libe ngumnikelo wesono lize elinye libe ngumnikelo otshiswayo;+ umbingeleli amcamagushele phambi koYehova ngenxa yokubhobhoza kwakhe. 16 “‘Indoda xa ithe yaphuma amadlozi,+ yowuhlamba wonke umzimba wayo emanzini ize ibe yengahlambulukanga kude kuhlwe. 17 Nasiphi na isambatho naso nasiphi na isikhumba esichatshazelwe ngamadlozi lawo simele sihlanjwe ngamanzi size sibe sesingahlambulukanga kude kuhlwe.+ 18 “‘Ukuba ithe yalala nomfazi indoda leyo ephume amadlozi, bohlamba umzimba ngamanzi baze babe ngabangahlambulukanga+ kude kuhlwe. 19 “‘Umfazi xa athe wabhobhoza, kwaba ligazi ukubhobhoza kwakhe enyameni yakhe,+ woba sekungcoleni kwakhe kokuba sexesheni+ imihla esixhenxe,+ yaye nabani na omchukumisayo woba ngongahlambulukanga kude kuhlwe. 20 Nantoni na alala phezu kwayo ekungcoleni kwakhe kokuba sexesheni yoba yengahlambulukanga,+ nento yonke asukuba ehlala phezu kwayo yoba yengahlambulukanga. 21 Nabani na ochukumisa umandlalo wakhe wozihlamba izambatho zakhe, ahlambe umzimba emanzini aze abe ngongahlambulukanga kude kuhlwe.+ 22 Nabani na ochukumisa nayiphi na impahla abehleli phezu kwayo wozihlamba izambatho zakhe, ahlambe umzimba emanzini aze abe ngongahlambulukanga kude kuhlwe.+ 23 Nokuba ngumandlalo wakhe okanye enye impahla abehleli phezu kwayo, ekuyichukumiseni kwakhe+ woba ngongahlambulukanga kude kuhlwe. 24 Ukuba indoda ithe yalala naye kwaza kwafikelela kuyo ukungcola kwakhe kokuba sexesheni,+ yoba yengahlambulukanga imihla esixhenxe, nawo nawuphi na umandlalo elala kuwo woba ngongahlambulukanga. 25 “‘Umfazi, xa athe wabhobhoza igazi imihla emininzi+ ingelilo ixesha lesiqhelo lokungcola kwakhe kokuba sexesheni,+ naxa lithe laphuma ithuba elide kunelokungcola kwakhe kokuba sexesheni, yonke imihla yokungahlambuluki kobhobhozo lwakhe yoba njengemihla yokungcola kwakhe kokuba sexesheni. Woba ngongahlambulukanga. 26 Nawuphi na umandlalo alala kuwo yonke imihla yokubhobhoza kwakhe woba njengomandlalo akuwo ngethuba lokungcola kokuba sexesheni kwakhe,+ yaye nayiphi na impahla athe wahlala kuyo yoba yengahlambulukanga njengokungahlambuluki kokungcola kokuba sexesheni kwakhe. 27 Nabani na ozichukumisayo+ ezo nto woba ngongahlambulukanga, yaye umele azihlambe izambatho zakhe, ahlambe umzimba emanzini aze abe ngongahlambulukanga kude kuhlwe. 28 “‘Noko ke, ukuba uthe wahlambuluka ekubhobhozeni kwakhe, wozibalela imihla esixhenxe, aze emva koko ahlambuluke.+ 29 Ngomhla wesibhozo wozithabathela amahobe amabini asendle+ okanye amantshontsho amabini amavukuthu, awazise kumbingeleli emnyango wentente yokuhlangana.+ 30 Uya kuthi ke ngelinye umbingeleli enze umnikelo wesono lize elinye libe ngumnikelo otshiswayo;+ yaye umbingeleli womcamagushela+ phambi koYehova ngenxa yokungahlambuluki kobhobhozo lwakhe. 31 “‘Nize nibakhwelelise ke oonyana bakaSirayeli ekungahlambulukini kwabo, ukuze bangafeli ekungahlambulukini kwabo ngokuwenza inqambi umnquba wam, ophakathi kwabo.+ 32 “‘Nguwo lowo umthetho ophathelele umntu obhobhozayo+ nomntu ophuma amadlozi+ waza akahlambuluka; 33 nomfazi osexesheni+ ekungahlambulukini kwakhe, naye nabani na obhobhozayo,+ nokuba yindoda okanye ngumfazi, nokuba yindoda elala nomfazi ongahlambulukanga.’”